काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी डा. सुनिल शर्मामाथि दुर्व्यहारको प्रयास भएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डा. शर्मामाथि आज सिंहदरबार परिसरमा विद्यार्थी संगठनका व्यक्तिहरुले दुर्व्यहारको प्रयास गरेका हुन् ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेर मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा डा. शर्मामाथि विद्यार्थीहरुले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । डा. शर्मालाई दुर्व्यहार गरेको आरोपमा ५ विद्यार्थी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरु मध्ये दुईजना समाजवादी विद्यार्थी युनियनका रहेका छन् । युनियनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले दुर्व्यहारको जिम्मा लिएका छन् । भने, अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्जा सिंहले पनि समर्थन जनाएकी छन् ।
डा. शर्मालाई दुव्र्यहार गर्न खोजेपनि उनीसँग रहेका अन्यले रोकेका थिए । घटनापछि डा. शर्माले आफुलाई विद्यार्थी नेताहरुले आक्रमणको प्रयास गरेको बताएका छन् । उनले सिंहदरबार भित्रै आफुमाथि सुनियोजित रुपमा आक्रमण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरु विचको छलफलमा एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजका महासचिब समेत रहेका डा. शर्माले मेडिकल शुल्कको विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय विच छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजको शुल्क आयोगले तोके अनुसार नै हुनुपर्ने, होस्टल अनिवार्य नगरिनुपर्ने निर्णय गर्दा डा. शर्माले फरक मत लेखेका थिए । डा. शर्माले त्रिवि र केयूविच एउटै शुल्क हुनुपर्ने बताउँदै मेडिकल विद्यार्थीहरुको समस्या विश्वविद्यालयसँग मात्र रहेको जिकीर गरेका थिए । होस्टलको सन्दर्भमा आयोगको ऐनमा नै उल्लेख भएकाले होस्टल चलाइएको बताए । मेडिकल शिक्षा संवेदनशील विषय भएकाले काउन्सिलले २०७५ मा तयार पारेको गाइडलाइन अनुसार नै चल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
डा. शर्माले बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ को दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क)ले व्यवस्था गरे अनुसार निर्धारण बैज्ञानिक ढंगले हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ को दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क)ले व्यवस्था गरे अनुसार निर्धारण बैज्ञानिक ढंगले नगरिएको हुँदा ऐनको मर्म र भावना अनुरुप शुलक निर्धारण हुनुपर्ने र यस शैक्षिक सत्रमा करीब ३२ हजार (करिब ८५ प्रतिशत) परीक्षार्थीहरु अनुत्तीर्ण भइ विभिन्न कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुमा करीब ४ हजार सिट रिक्त रहन गएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्काल पुनः परीक्षा वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी रिक्त रहेका सबै सिटहरु परिपुरण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल पहल गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गर्दछु ।’ डा. शर्माले मन्त्रालयको निर्णयमा फरक मत राख्दै भनेका छन् ।
सोक्रममा डा. शर्माले आफुहरुले आयोगको नियम अनुसार नै शुल्क लिएको अतिरिक्त शुल्क नलिएको बताएका थिए । त्यसो त, मेडिकल कलेजहरुले अनिवार्य होस्टल सञ्चालन गर्नुपर्ने नत्र सिट नै नदिने आयोगको गाइडलाइनमा उल्लेख छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदिप गिरीले डा. शर्मामाथि कालोमोसो नदलिएको तर, गालीगलौज गरी दुर्व्यवहार चैं भएको बताए । ‘मन्त्रालयमा भएको वार्ता सफल नहुँदा उहाँहरु फर्किने क्रममा भर्बल रूपमा गाली गरिएको थियो । चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेका छौं ।’ उनले भने ।